Inona ny atao hoe Vavaka? | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Inona ny atao hoe Vavaka?
Inona ny atao hoe Vavaka?
Novambra 28, 2019
vavaka dia fomba ara-panahy hifandraisana amin'ny lanitra. Tahaka ny fifandraisan'ny olona amin'ny olona ihany. Ny vavaka dia fantsona iray ahafahan'ny olona maty tsy mety maty. Fomba fisehoan-dehilahy malaky ny olon-tsotra izay mikaroka ao amin'ny rahona tsy hita maso. Ny fifandraisan'ny olona amin'ny lehilahy dia zavatra roa. Midika izany fa misy hafatra sy valiny. Toy izany koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Voaporofo fa tsy misy fisalasalana mitombina fa ny fanahin Andriamanitra no miteny amin'ny fotoana rehetra. Saingy tsy mandre an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny olona. Izany dia satria tsy mijanona eo amin'ny toerana ivavahana isika indraindray.
Isaky ny miresaka amin'ny Raintsika (Andriamanitra) isika amin'ny alalan'ny vavaka. Vonona hiresaka amintsika foana izy. Tsy misy maharesy lahatra fa izao tontolo izao dia maizina sy mahasintona hivelomana. Noho izany, ny olona dia mila mitady ny torohevitr'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony. Ny bokin'i Md Lioka 5:16 Ary niala teo an-efitra izy ka nivavaka. Io andalana io dia miresaka an'i Kristy Jesosy miala tsiny amin'ny vahoaka mba hifandray amin'ny Ray. Ny tena fototry ny vavaka eo amin'ny fiainan'ny mpino dia tsy azo resahina loatra. Raha i Kristy no ilay mpanoratra sy mpamita ny finoantsika dia tsy afaka manao izany raha tsy mivavaka amin'ny Ray. Iza moa olombelona olombelona mety maty ka tsy hijanona sy tsy hijanona eo amin'ny toerana ivavahana.Izay ny fototry ny fahariana antsika dia ny manana koinonia (Intimacy) amin'Andriamanitra. Tiany foana isika eo imasony mandrakariva. Ary ny hany làlana mahomby dia amin'ny alàlan'ny PRAYER.
Ny kristiana tsy mivavaka dia tsy manan-kery. Hanjary ho rembin'ny tanan'ny mpiremby (Devoly) izy. Tsy gaga ve ianao fa ny soratra masina dia nilaza taminay tamina boky ao amin'ny 1 Tesaloniana 5:17 Mivavaha tsy mitsahatra. Io no manazava ny fototry ny vavaka. Ny vavaka dia ampinga ara-panahy sy fiarovan-tsika ampiasaintsika hiaro antsika amin'ny fanoherana ara-panahy.
Adinonao angaha fa ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Efesiana 6:11 Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba ho afaka hijoro hanohitra ny fanangoleny 'ny devoly.
Ny tena nivavahan'i Daniel tsara ka tsy nanan-tsafidy ny lanitra afa-tsy ny namoaka ny fitahiany. Saingy teo anelanelan'ny Anjely nitondra ny tsodranon'i Daniel sy Daniel ny andrianan'ny Persia. Saingy, nijanona teo amin'ny toeram-pivavahana i Daniel mandra-pandreren'ny lanitra hijery ny toe-javatra. Avy eo dia fantatra fa nitazona ilay anjely ilay andrianan'ny Persia. Nisy anjely mahery sy matanjaka kokoa nalefa hanala ny lalana ho an'ilay anjely nitondra valiny tamin'i Daniel. Ireo rehetra ireo dia natao tamin'ny alàlan'ny vavak'i Daniely. Na izany aza, ny tanjona tanjona amin'ny vavaka dia tsy azo hazavaina amin'ny fehintsoratra vitsivitsy fotsiny. Ny fananana an'io ao an-tsaina dia ireo no tanjon'ny vavaka amin'ny fiainana kristiana.
1. MITOMPOANA AMIN'NY RAY
Iray amin'ireo antony tokony hivavahantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny dingana hifandraisana amin'Andriamanitra, dia hanome torolàlana, fitsipika ary torolàlana ilain'ny fiainantsika isika.
Habakoka 2: 1 Hitsangana eo am-piambenana aho ary hapetraka eo ambonin'ny tilikambo, ary hijery hijery izay holazainy amiko, sy izay havaliko, rehefa mananatra aho.Habakoka 2: 2 Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe: Soraty ny fahitana, ka ataovy madio eo ambonin'ny latabatra mba hazakazaky ny mamaky azy.
Ity andalan-Baiboly ity dia manazava ny votoatin'ny fifandraisana amin'ny Ray. Hoy i Habakoka Mpaminany: hitsangana eo ambonin'ny famatrehako aho ka hametraka ahy eo ambonin'ny tilikambo. Izany dia asan'ny mpitily ara-panahy. Lehilahy iray izay nijanona teo amin'ny toerana fivavahana mba hihainoana an'Andriamanitra. Ary hijery izay holazainy amiko sy izay havaliko rehefa mananatra ahy aho. Izany no fiainan'ny olona miandry ny fahenoana an'Andriamanitra ny amin'ny tanàna iray.
Ny tanjon'ny vavaka ataontsika dia ny hifandray amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka amin'Andriamanitra isika dia hiteny amintsika Izy. Ny fizotry ny serasera dia mbola tsy vita mandra-pahatongan'ny fanehoan-kevitra.
2. NY VAVAKA MOMBA NY FIVORIANA NY ADORANA
Matetika ny olona dia milaza fa ny Thanksgiving no sakafo atolotray ho an'Andriamanitra. Na izany aza, tsy misy ampahany amin'ny soratra masina milaza fa ho faty mosary Andriamanitra raha tsy te hisaotra azy ny olona. Ho an'ny firaketana, ny kerobima misy voninahitra dia tsy manana raharaha hafa ataon'izy ireo afa-tsy ny manompo an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Apôk. 4 dia nanambara zavaboary tsy tambo isaina izay manompo an'Andriamanitra. Na dia ny loholona efatra amby roa-polo izay mipetraka eo anoloan'ny seza fiandrianana aza dia ho eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny satro-boninahiny. Ka na hidera na hiankohoka Aminy isika na tsia dia tsy mampiova ny maha Andriamanitra azy izany.
Na izany aza, ny vavaka ataontsika dia mbola afaka miasa ho fitaovana fanoloran-tena. Fomba iray hilazana ny fahefan'Andriamanitra, ny fampitomboana ny fahamboniany noho izay rehetra noforonina. Ny mpanjaka David dia nahatakatra ny fahaizan'ny nanolorany ny vavaky ny Fanolorana an'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha manazava ny halehiben'Andriamanitsika ny boky iray manontolo amin'ny Salamo 8: Mila lehilahy iray izay manana fanambarana momba ny fahalehibiazan Andriamanitra hivavaka aminy amin'ny fomba toy izany. Gaga i Davida Mpanjaka fa mbola mieritreritra ny olombelona foana Andriamanitra.
Ny vavaka fiankohofana dia tsy fomba iray handokafana. Zavatra tokony ho avy amin'ny fo miaraka amin'ny fahatakarana izany. Ho gaga ianao fa na eo aza ny habibiana nataon'i David, dia notendren'Andriamanitra ho lehilahy araka ny fony ihany izy.
3. NY vavahadin-tenantsika dia manompoa vola am-pitiavana
Ny fivavahantsika amin'Andriamanitra dia afaka manatanteraka ny tanjon'ny fibebahana. Ohatra tonga lafatra amin'izany koa i Davida Mpanjaka. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 51. Rehefa takatsika fa nanota ary nanao ratsy tamin'Andriamanitra sy ny olombelona. Ny fivavahantsika amin'Andriamanitra dia mety ho fitaovana fibebahana.
Mandritra izany fotoana izany dia mila lehilahy torotoro fanahy ny olona vao mahatakatra fa nanota izy. Taorian'ny namadihan'i Petera an'i Jesosy dia nahatsiaro reraka tao am-pony izy. Nankany amin'ny toerana miafina izy mba hitady famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka. Tanjona lehibe iray ivavahan'ny vavaka ataontsika ny fibebahana. Andriamanitra ô, miala tsiny aho fa nanao an'ity, omeo fahasoavana aho, tsy hataoko intsony.
4. NY FIVAVAHANA MANOLAKA NY DIDIANA AN'ANDRIAMANITRA
Ny vavaka ataontsika dia mety hampiasaina amin'ny fanaovana fangatahana. Mivavaka isika mba hahazo ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ho an'ny fiainantsika. Tsarovy ny tantaran'i Hezekia Mpanjaka rehefa narary mafy izy. Nampahafantarin'ny Baiboly antsika fa efa ho faty izy. Ary Andriamanitra aza dia naniraka an'Isaia Mpaminany hampilaza amin'i Hezekia hiomana amin'ny fahafatesany. Na izany aza, i Hezekia mpanjaka dia nitalaho tamin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny vavaka ao amin'ny 2 Mpanjaka 20. Nilazany Andriamanitra mba hahatsiaro ny asa fanompoana nataony sy ny sorona nataony ho an'Andriamanitra. Ary ho setrin'izany, Andriamanitra dia nanampy taona maro ny androm-piainany. Ny vavaka ataontsika dia afaka manatanteraka ny fangatahana amin'Andriamanitra, mitady Fahasoavana sy Famindram-po. Fantatsika ny fampanantenany sy ny faminaniana nolazain'Andriamanitra momba antsika. Mahazo manontany an 'Andriamanitra isika rehefa mahatsapa isika fa tsy mandeha araka izay nolazainy momba antsika ny zavatra.
INONA NO FIVAVAHANA?
Ny bokin'ny Lioka 11 dia nanazava ny fomba nivavahan'i Jesosy tamina toerana iray. Taorian'ny vavaka dia nankeo aminy ny mpianany iray ary nanontany azy ireo ny fomba hivavahana. Nivavaka tamin'ny mpianany i Jesosy. Kristiana maro izay tsy manana ny fahalalana ny dikan'io vavaka io no nanararaotra azy. Betsaka ny olona no miteny an'io amin'ny fahatakarana.
1. Ry Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao.
Ity andiany voalohany amin'ny vavaka ity dia manazava ny ilaina ny fanekena, ny fiderana sy ny fisaorana Azy. Alohan'ny angatahantsika zavatra amin'Andriamanitra, dia tokony ho tonga aloha ny fisaorana. Na i Jesosy aza dia naneho izany rehefa teo amin'ny fasan'i Lazarosy izy rehefa nilaza izy Dada mankasitraka anao satria mandre ahy foana ianao Md Joany 11:41 Dia nesorin'izy ireo ny vato teo amin'ny toerana nandevenana ny maty. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: Ray ô, misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao.Amin'ny mino, tsy maintsy mamboly ny fisaorana an'Andriamanitra isika alohan'ny mangataka na inona na inona. Izany dia mahatonga ny vavaka ataontsika lasa mandaitra kokoa.
2. Ho tonga ny fanjakanao. Hatao et in an-tany ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra.
Rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra. Tokony hivavaka foana Andriamanitra hanjaka eto an-tany. Ny fangatahana ny fanjakan'Andriamanitra ho avy dia tsy mikasika ny fiavian'i Kristy haingana. Milaza ny Baiboly fa tokony hiasa mandra-pihaviny Izy. Raha eo am-pametrahana azy dia Paramount no ataontsika antoka fa ny toro-hevitr'i Kristy irery ihany no mijoro.
Ny mandat ny iraka nampanaovin'i Kristy dia tsy maintsy aparitaka amin'ny lohasaha mangidy an'ireo mpanompo sampy ary tsy voavonjy. Ny Mat. 28: 19-20 dia nandidy ny handehanantsika amin'izao tontolo izao sy ny maha-mpianatra ny firenena rehetra. Hanomboka eto an-tany ny fanjakana rehefa tonga amin'ny fiheverana ny olona sy ny firenena ary ny tanàna rehetra fa i Kristy no Tompo.
3. Omeo anay anio izay hanina sahaza anay anio:
Ity no tapany voalohany amin'ny vavaka izay ahafahantsika mangataka amin'Andriamanitra. Ohatra tonga lafatra ho an'ny vavaka fitalahoana manokana. Manome voninahitra ny teniny mihoatra noho ny anarany Andriamanitra. Ilaina tokoa ny rehefa mangataka zavatra avy amin'Andriamanitra isika, dia mamerina izany amin'ny teniny.
Ny andinin-tsoratra masina dia mahatonga antsika hahatakatra fa hanome izay ilaintsika rehetra Andriamanitra araka ny hareny amin'ny voninahitra. Tokony hahalala sy hahatakatra ny tenin Andriamanitra isika mba hahomby ny vavaka ataontsika.
4. Ary avelao ny helokay, tahaka ny namelanay ny helokay:
Ilaina ny manamarika fa taorian'ny fahafatesan'i Kristy, dia tsy eo ambanin'ny ozon'ny lalàna intsony isika. Ny fahafantarana tsara fa ny fahamarinantsika rehetra dia toy ny lamba maloto eo imason'Andriamanitra. Ny fikatsahana famelana dia ampahany lehibe amin'ny vavaky ny Tompo.
Ny soratra masina dia milaza fa ny sofin'ny Tompo dia tsy mavesatra loatra maheno antsika. Ary na ny tànany fohy aza mba hanavotana antsika. Fa ny fahotantsika kosa dia niteraka tsy fitoviana eo amintsika sy Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika isaky ny mandeha manatona an'Andriamanitra amin'ny vavaka dia zava-dehibe ny fikatsahantsika famelana ny fahotantsika.
Ary koa, tsy maintsy mianatra mamela heloka ny hafa isika. Tsy mamela ny hafa isika mba hamelan'Andriamanitra antsika koa. Hevitra diso momba an'io ampahany amin'ny vavaky ny Tompo io. Kristiana maro no mino rehefa tsy mamela ny hafa izy ireo, Andriamanitra koa tsy hamela ny helony. Andriamanitra tsy hieritreritra na hanao toy ny lehilahy. Tsy maintsy mamela ny hafa isika satria Andriamanitra dia namela ny fahotantsika tamin'ny fandatsahana ny ran'i Kristy.
5. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy;
Ara-dalàna, ny vavaka dia ampinga sy ampinga miaro antsika amin'ny ratsy. Nampitandrina mafy antsika ny soratra masina mba tsy ho tsy mahalala ny fitaovan'ny devoly. Izany no maha-zava-dehibe ny fangatahantsika ny fiarovan'Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Mangataka izahay mba hiarovany antsika amin'ny fakam-panahy sy ny teti-dratsy rehetra mety hataon'ny devoly amintsika.
6. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen:
Tsy zavatra vazivazy ny fahitan'ny ankamaroan'ny kristiana mameno ny vavak'izy ireo amin'ny fisaorana. Ny vavaka dia tokony hanomboka amin'ny fitsaohana sy fisaorana ary tsy maintsy miaraka amin'izany ihany koa.
Ao amin'ny bokin'ny Salamo rehefa nitady an'Andriamanitra i Davida. Hoy izy hoe ahoana no ahafahako manasazy an'ireo zavatra nomeko fisaorana? Midika izany, ny lehilahy dia azo hofaizina noho ny fangatahana diso, fa ny lehilahy iray dia tsy afaka ny hanome fisaorana azy amin'ny tsy mety.
Alohan'ny hamaranana ny vavaka ataontsika dia zava-dehibe ny hisaorantsika an Andriamanitra noho ny famaliany ny vavaka ataontsika. Dingana iray amin'ny finoana izany. Avy eo dia mamarana ny fotoam-bavaka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika. Io anarana io dia ny fidirantsika amin'ny fitoerana masina indrindra.
1. Ny vavaka dia manampy antsika handresy fakam-panahy
Ny vavaka ataontsika tsy tapaka amin'Andriamanitra dia manampy amin'ny fampivoarana ny fari-panahintsika. Manome antsika herim-po handresena izay fakam-panahy rehetra mety hakan'ny devoly antsika. Nifady hanina sy nivavaka nandritra ny 40 andro sy alina i Kristy dia nentina tany an'efitra mba halaim-panahy. Saingy tsy naharesy azy ny devoly satria i Kristy dia nanangana ny tenany tamin'ny toeran'ny vavaka.
2. Manampy antsika hahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka
Rehefa mifandray amin'ny Ray isika dia manome tari-dalana ho an'ny fiainantsika Izy. Ny ain'ny olona mivavaka dia tsy ho diso lalana. Azon'i Jesosy notenenina mafy ny fanahin'ny tahotra rehefa nilaza izy hoe raha sitrak'Andriamanitra ny hanaovana azy ity kapoaka ity. Fa i Kristy raha mbola nivavaka dia nampahafantatra fa tsy izany no sitrapon'Andriamanitra. Ary noho izany dia henoy mafy ny devoly ary angataho mba hatao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra lalandava isika dia hampahafantatra antsika ny fikasany sy ny drafiny ho an'ny fiainantsika.
3. Manampy anay hahalala an'Andriamanitra bebe kokoa
Tsy misy isalasalana fa ny fotoana andaniaman'ny olona eo imason'Andriamanitra dia tsy havela tsy hihetsika. Ary arakaraka ny maha-lehilahy azy hijanona eo anatrehan'Andriamanitra dia vao manambara ny tenany amin'ny olona toy izany Andriamanitra. Ohatra ny mahazatra ny Apôstôly Paul. Izy dia tsy isan'ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Na izany aza dia fantany ilay lehilahy Kristy Jesosy mihoatra noho ireo izay nanaraka an'i Kristy nandritra ny taona maro.
4. Manamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny vavaka
Rehefa mivavaka matetika kokoa isika dia lasa naman'Andriamanitra. Ny vavaka ataontsika tsy tapaka dia ahafahan'Andriamanitra mamantatra ny feontsika eo amin'ireo olona an-tapitrisany izay miantso Azy. Raha afaka nilaza Andriamanitra fa tsy hanao na inona na inona aho raha tsy milaza amin'ny namako an'i Abraham.
Nanazava ny haavon'ny fifandraisana eo amin'i Abrahama sy Andriamanitra izany. Nivadika izy ireo, talohan'ny nandravana ny tanànan'i Sodoma sy Gomora. Arakaraka ny hivavahantsika bebe kokoa no hihamatanjaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.
5. Miaro antsika amin'ny ratsy
Hoy ny soratra Masina fa izaho mitondra ny marin'i Kristy, aza avela hisy hanahirana ahy. Misy ny vavaka fiarovana. Arakaraka ny hijanonantsika ao amin'ny fitoeran'ny vavaka no amarin'Andriamanitra bebe kokoa ny zavatra hitranga amintsika. Andriamanitra dia afaka manambara na inona na inona amin'ny lehilahy izay mandany fotoana hisoloana ny vavaka. Izahay dia nahita ny raharaha lehilahy narovana tamin'ny lozam-pifamoivoizana izay nitaky ny ain'ny hafa.
Farany, ry rahalahiko, toy ny sakafo lanintsika ihany, toy ny rivotra iainantsika ary toy ny rano sotrointsika. Tena ilaina eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra ny vavaka. Miaina zavatra toa tsy nety tamin'ny fiainanao ve ianao, ento am-bavaka amin'Andriamanitra. Angamba efa ela ianao no nahare avy tamin'Andriamanitra, miverena any amin'ny mpanamboatra anao amin'ny toeran'ny vavaka, miandry anao izy. Tiany ianao ary mbola te hiresaka aminao izy. Ny votoatin'ny famoronana rehetra dia ny fananana firaisana amin'Andriamanitra. Ary ny fomba tsara indrindra handrehitra io fiarahana io dia amin'ny alàlan'ny vavaka.
Previous lahatsoratraTsy maintsy maty ny vavakeliko Heroda
Next lahatsoratra21 Zava-dehibe amin'ny Vavaka
Zava-bavaka 100 manohitra ny tsy fahombiazana ary ny tsy fahombiazana
Vavaka 50 alina hanoherana ny fanemorana ny fanambadiana
Aprily 1, 2019
Vavaky ny Paska manambara ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty